Забур 35 CARS - Nnwom 35 AKCB
2Грех побуждает нечестивого
3Льстит он себе в своих же глазах,
чтобы возненавидеть его35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его»..
4Слова его уст полны беззакония и обмана;
5Даже на ложе своём замышляет он беззаконие.
6Вечный, милость Твоя до небес,
7Праведность Твоя велика, как горы,
Вечный, Ты хранишь человека и зверя!
8Милость Твоя, Всевышний, драгоценна!
9Пируют они от щедрот Твоего дома;
10Ведь у Тебя источник жизни,
11Излей Свою милость на знающих Тебя,
12Да не наступит на меня нога гордеца;
13Посмотри, как пали беззаконники:
CARS : Забур 35
1Awurade wo ne wɔn a wɔne me di asi no nni asi;
ko tia wɔn a wɔko tia me.
2Fa wo nkatabo ne wʼakode;
na sɔre bra bɛboa me.
3Twe peaw ne abonnua
wɔ wɔn a wɔtaa me no so.
Ka kyerɛ me kra se,
4Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no,
ma wɔn anim ngu ase;
wɔn a wɔbɔ me sɛe ho pɔw no,
ma wɔmfa aniwu nsan wɔn akyi.
5Ma wɔnyɛ sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu
wɔn a Awurade bɔfo repam wɔn no.
6Ma wɔn akwan so nnuru sum na ɛso ɛnyɛ toro,
na Awurade bɔfo ntaa wɔn.
7Esiane sɛ wɔde ɔtan sum me afiri kwa,
na wotuu amoa maa me a menyɛɛ wɔn hwee no nti
8ma ɔsɛe mmefu wɔn mu
na ɔtan no a wɔde hintaw no nyi wɔn,
na ma wɔnhwe amoa no mu nsɛe.
9Afei me kra ani begye wɔ Awurade mu
na wasɛpɛw ne ho wɔ ne nkwagye mu.
10Me nipadua nyinaa bɛteɛ mu aka se,
“Hena na ɔte sɛ wo, Awurade?
Wugye ohiani fi ahoɔdenfo nsam,
ne nea onni bi fi apoobɔfo nsam.”
wobisa me nneɛma a minnim ho hwee ho asɛm.
12Wɔde bɔne tua papa a meyɛ so ka
na wɔma me kra yɛ basaa.
13Nanso bere a wɔyaree no, mifuraa atweaatam
na mede akɔnkyen brɛɛ me ho ase.
Bere a me mpaebɔ ho mmuae nnya mmae no,
14mekɔɔ so twaa adwo,
sɛnea meyɛ ma mʼadamfo anaa onuabarima.
Mede awerɛhow sii me ti ase
te sɛ nea meregyam me na.
15Nanso bere a mihintiw no wɔde anigye boaa wɔn ho ano;
afowfo twaa me ho hyiae a minnim,
na wodii me ho nseku a wɔantwa so da.
16Wɔde adwemmɔne dii me ho fɛw te sɛ nnipa a wonni nyamesu,
wɔtwɛree wɔn se guu me so.
17Awurade, wobɛhwɛ wɔn akosi da bɛn?
Gye me nkwa fi wɔn sɛe mu,
gye me nkwa a ɛsom bo no fi saa gyata yi nsam.
18Na mɛda wo ase wɔ guabɔ kɛse ase;
wɔ nnipa dodow mu na mɛkamfo wo.
19Mma mʼatamfo a wɔtan me kwa no
nhwɛ me haw nserew.
Mma wɔn a menyɛɛ wɔn hwee nanso wɔtan me no
mmfa adwene bɔne mmu me anikyiw.
20Wɔnnkasa asomdwoe so,
na mmom, wɔde ntwatoso
tia nnipa a wɔmpɛ wɔn ho asɛm wɔ asase yi so.
21Wɔhwɛ me haw ka se, “Yiw! Yiw,
yɛde yɛn ankasa ani ahu.”
22Awurade, woahu na mmua wʼano.
Ntwe wo ho nkɔ akyiri, Awurade.
23Nyan, sɔre na bɛbɔ me ho ban!
Ka bi ma me, me Nyankopɔn ne mʼAwurade.
24Di mʼasɛm ma me wɔ wo trenee no mu, Awurade me Nyankopɔn;
mma wɔnnhwɛ me haw nserew.
25Mma wɔnnwene nka se, “Yiw, nea yɛpɛ ni!”
anaa wɔnnka se, “Yɛanya no.”
26Ma wɔn a wɔhwɛ me haw serew me wɔ mʼahohiahia mu no
nyinaa anim ngu ase na wɔnyɛ basaa;
ma wɔn a wodi me so akokurokosɛm no
nhyɛ aniwu ne animguase atade.
27Ma wɔn a wodi ahurusi wɔ me bembu ho no
mfa anigye ne ahosɛpɛw nteɛ mu
bere nyinaa mu; ma wɔnka se, “Momma Awurade so,
ɔno na nʼani gye ne somfo yiyedi ho.”
28Me tɛkrɛma bɛka wo trenee,
ne wʼayeyi, da mu nyinaa.
AKCB : Nnwom 35